Topnepalnews.com | कसरी भयो मुस्कान सहितको प्रहरी ? प्रहरीको त्रासको कारण दोधारा चाँदनीका ६ घरधुरी बिस्तापित
कसरी भयो मुस्कान सहितको प्रहरी ? प्रहरीको त्रासको कारण दोधारा चाँदनीका ६ घरधुरी बिस्तापित
Posted on: June 25, 2016 | views: 565
पप्पु गुरुङ्, ११ असार, दोधारा चाँदनी, कञ्चनपुर । प्रहरीको त्रासको कारण कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीका ४ घरधुरी बिस्तापित भएका छन् । जेठ १८ गते मंगलवार करिब ३ बजे प्रहरीले मानव तस्करीमा संलग्न अरोपितलाई पक्राउ गर्दा गाँउनै त्रसित गराउदै ६ जना बिरुद्ध सार्वजनिक मुद्धा दर्ता गरेको कारण ६ घरधुरी त्रासको कारण बिस्तापित भएका स्थानियहरुले अरोप लगाएका छन् । उनिहरु आफ्नो घरमा ताला लगाएर तथा आफ्ना बालवालिका छिमेकीको घर छाडेर भारतको बम्बई लगाएत स्थानमा पलाएन भएको स्थानियहरुले बताएका छन् । “प्रहरीको त्रास तथा धम्कीले केहि दिन आफन्तको घरमा लुकेर बसे, त्रास अझै बढेपछि भारत छिर्न बाध्य भए हुन्” एक स्थानिय महिला पार्वती चदारोले बताए । प्रहरीले गाँउमा भान्साको चुल्हालाई लात्तीले हानेर समेत भत्काईदिने गरेको बताईएको छ् ।
उनिहरु यस वर्ष प्रहरीको त्रासको कारण धान रोपाई समेत गर्न नपाउने भएका छन् । प्रहरी निरिक्षक माथी हातपात तथा अभियुक्त भगाएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान पछि ६ जना बिरुद्ध सार्वजनिक मुद्धा दर्ता गरेको प्रहरीले जनाएको छ् । मंगलवार ईलाका प्रहरी कार्यालय दोधारा चाँदनीका प्रहरी निरिक्षक बिरेन्द्र बिर विश्वकर्मा र प्रहरी जवान गगन ढुङ्गाल दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. ८, सुन्दरनगरमा सुरक्षा अवस्था जाँच गर्ने जाने क्रममा अचानक प्रहरीले चेलीबेटी बेचबिखनको मुद्धामा २०६६ साल माघ १७ गते देखि फरार रहेका दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. ८, सुन्दरनगरका बिर बहादुर सुनारलाई देखेपछि पक्राउ गर्न थालेको हो । अभियुक्तका आफन्तजनले प्रहरी माथी हातपात गरि अभियुक्तलाई भगाउन सहयोग गरेको तथा प्रहरी माथी हातपात गरेको उनिहरुमा आरोप छ् ।
“सादा पोसाकमा आएको प्रहरीलाई हामीले चिनेनौ । हामीले चोरहरुले बिर बहादुर सुनारलाई गोली हान्यो भनेर बचाउन लागेका थियौ” प्रहरीको अनुसन्धान पछि अभियुक्त सुनार आफन्त काला सुनार, माईला भनिने बिक्रम सुनार, दिवान सुनार, गणेश चदारो, शेर बहादुर चदारो र अभियुक्त सुनारको श्रीमती ( नाउ नखुलेको ) को नाउमा सार्वजनिक मुद्धा दर्ता गरिएको हो । २०६६ साल माघ १७ गते मानव बेचविखन बिरुद्ध दोधाराका एक महिलाले बिर बहादुर सुनार लगाएत भारतिय नागरिक राजु रावल र गोपाल तिवारी बिरुद्ध अदातमा मुद्धा दायर गरे लगत्तै सुनार फरार रहेका थिए ।
उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पटक पटक गएपनि सुनार भारत गएको कारण उनाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन् । स्थानिय पार्वती चदारो अनुसार गाँउमा बेचबिखनको मुद्धा छिनोफानो गरिसकेको भएको बताएका छन् । उक्त छिनोफानोमा कुरा मिलाउन बिर बहादुर सुनारले रु. २१ हजार भारतिय रुपियाँ दिएका थिए, भने भारतिय नागरिक राजु रावल र गोपाल तिवारीले रु.४० हजार भारतिय रुपिया दिएर तत्काीन माओबादीले लिएर मुद्धा गाँउमा साम्य बनाएको बताईएको छ् । तर उक्त मुद्धा अदालतमा रहेको बारे कसैे चाँसो नदेखाएको कारण यो समस्या आएको चदारोको भनाई रहेको छ् ।